Iska Jira! Kooxda Jwxo-shiil, oo Wada Farsamo Cusub oo ay Dhaqaalo ku Guranayaan – Rasaasa News
Iska Jira! Kooxda Jwxo-shiil, oo Wada Farsamo Cusub oo ay Dhaqaalo ku Guranayaan
Feb 28, 2011 dambiile, Digniin: Kooxda Jwxo-shiil, ethiopia peace, Jwxo-shiil, no eritrea, ogaden peace, oo Wada Farsamo Cusub oo ay Dhaqaalo ku Guranayaan
Warar aan ka helayno waqooyiga Maraykanka, ayaa waxay sheegayaan in kooxda Jwxo-shiil, ee argagixisada ah oo bariyihii dambe oo dhan ay ku adkady in ay helaan dhaqaale, ka dib kolkii ay wada fahamtay bulshada ka soo jeeda dhulka Somalida Ogadeeniya, ayaa waxaa hada la sheegayaa in ay bilaabeen tabo cusub oo dawrsi ah.
Farsamadan cusub ee dawrsiga ah, ayey kooxdu ka bilowday dhawr dal oo Yurub ah iyo Waqooyiga Maraykanka, waxayna rajaynayaan in ay farasmadani u shaqayn doonto lacago badana ka heli doonaan dadweynaha, ka hor inta aan la fahmin.
Qorshahan cusub, ayaa ah mid dadka loo dirayo islaamo iska dhigaya wadaado [waxdo], hor Eebahay dad masaakiin ah wax ugu uruurinaya sida; qoysas dan yar ah oo aan lahayn wax xigaal ah oo gacan qabta, dad guryo ka gubteen, dad ku xidhan dalal dibada ah, ruux Isbitaal ku jira oo dhibaataysan iyo ruux la dhacay.
Tab kale ayaa ah, Islaan hebla ayaa laga xaday Kaarkii Bangiga [vissa card], waxaan laggaga qaatay Bangiga lacag badan. Bangiga ayaana u haysta in ay lacgtii bixiso, marka walaaleey gacan qabo islaantan, hadii ayna bixin lacagta waa la xidhi.
Waxaa iyana dhawaan kooxda Jwxo-shiil, magaalada Minneaplois laga Ogaaday in ay lacag ku gurteen oday caan ka ah degaanka Somalida. Waxay dadka u sheegayeen in odaygii hebal ahaa uu Isbitaal ku jiro, loona baahan yahay lacag Isbitaal gaar ah lagu geeyo si loo daaweeyo, dad badan ayaana lacag ku siiyey arintaas. Kolkii dambe waxaa Telefoon lagula hadlay odaygii wuxuuna sheegay “in uusan xanuunsan Isbitaala uusan tagin ee waligii uu maanta u caafimaad badan yahay.”
Waxaa kale dalka Norway lacago ay kaga qaateen qoys aan guri ka guban oo ay sheegeen in uu guri ka gubtay caruurtiina banaanka u fadhido. Dalka Ingriiska waxaa la sheegay in lacago ay kaga gurteen dad ku xidhan Sudan oo lacag loo haysto, ka dib markii lacag dad u dhiibtay laga xaday.
Dadka lacagahan uruurinaya ma ah dadkii hore loogu yaqaanay ee u shaqayn jiray kooxda Jwxo-shiil, waa dad cusub oo hada la hawl galiyey Iskana dhigay dad wadaado ah dhinaca Eebe Weyne ka socda.
Sidaasi daraadeed waxaanu dadweynaha uga digaynaa in ayna bixinin lacago ayna hubin in uruurintoodu ay xaq tahay. Sadaqo idiin noqon mayso wixii idinka oo aan hubin aad si khaldan u bixisaan, hana la iska ilaaliyo munaafiqqinta wajiyada badan ee kooxda Jwxo-shiil ee ka ganacsata dhiiga dadka.